Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Qaraxii magaalada Baraawe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaMadaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Qaraxii magaalada Baraawe
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Qaraxii magaalada Baraawe
Hiiraan Xog, Apr 13, 2018:- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xalay la hadlayay Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay Qarixii shalay ururka Al-shabaab ay ka geysteen garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Shabaab ayaa qarax Miino oo ay ku aaseen garoon kubada cagta lagu cayaaro waxa ay ku dileen ilaa Afar qof, halka ay ku dhaawaceen tiro intaas ka badan, kuwaasi oo u badnaa Dhalinyaro.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in cadawga kaliya ee dalka dhibaatada ku haya uu yahay ururka Al-shabaab, loona baahan yahay in dowlad iyo shacab laga wada qeyb qaato sidii loo wiiqi lahaa.
“Sida aad ogtihiin maanta Baraawe waxa ay ku qarxiyeen dhallinyaro aan waxba galabsan oo kubad iska ciyaaraya. Cadawga kaliya ee aan leenahay waa iyaga, waxaana u baahannahay wax ka yar labo sano oo aan isku duubni ula dagaalanno Al-shabaab” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday falkii qaraxa ahaa ee ka dhacay Degmada Baraawe, isaga oo Alle uga baryay dadkii dhaawacmay inuu caafimaad deg deg ah siiyo.
Hadalkan ayuu Madaxweyne Farmaajo ka sheegay xilli xalay uu ka qeyb kulan lagu sagootinayay Gudoomiyihii Golaha Shacabka Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, kaasi oo ka dhacay Villa Somalia.
DAAWO SAWIRO:- Maamulka Koofur Galbeed oo lacag gudoonsiyay nin ka soo gostay Al-Shabaab